Indlela yokujoyina i-Royal Royal Mounted Police
Indlela yokujoyina i-RCMP
I-RCMP iqinisekisa imithetho ye-federal kwaye inika iinkonzo zamapolisa kwiikontraka kumaphondo amaninzi, oomasipala, kunye noluntu lwasekuqaleni kwelizwe lonke eCanada. I-RCMP nayo ithatha inxaxheba ekugciniseni uxolo lwamazwe ngamazwe.
Ixesha elifunekayo: iinyanga ezili-12 ukuya kwezi-18
Yiba ngummi waseCanada , ube ngumntu onobuhle, ube nekhono kwiNgesi okanye ngesiFrentshi, kwaye ube neminyaka engama-18 ubudala xa usebenza.
Fumana idiploma yeBanga-12 okanye ilingana, ilayisense yokuqhuba iCanada efanelekileyo, kwaye ulungele ukuhlangabezana neemfuno zeMpilo kunye nezokwelapha zeRCMP.
I-RCMP icebisa ukuba uye kwiNkcazo yokuSebenza ukuze ufunde malunga neenkonzo zamapolisa ezinikezelwa yi-RCMP kwaye uzimisele ukuba ngaba umsebenzi weRCMP ulungile kuwe.
Thatha kwaye udlule i-RCMP Police Battery Battery (RPAB). I-RPAB yenziwe ngamanyathelo ahlukeneyo ahlukeneyo. Uvavanyo lo kuqala yi-RCMP Police Testing Attitude (RPAT), amanyathelo okubunjwa (isipelingi, igrama kunye nesigama), ukuqonda, imemori, isigwebo, ukubonwa, ingqiqo kunye nokubala.
Ukuba udlula i-RPAT, igama lakho liya kufakwa eluhlu lokufaneleka. Abo bafumana amanqaku amaninzi kakhulu kukhuphiswano baya kuqhubela phambili kwisinyathelo esilandelayo. (Ukuba awuphumelelanga kwi-RPAT, ungayithatha kwakhona emva konyaka wokulinda unyaka.)
Uvavanyo lwesibini kwi-RPAB yi-Questionnaire Personal Personality Questionnaire (SFPQ) ebonisa ukuba unembeza kangakanani.
Abafakizicelo abagqithisa zombini iindawo ze-RPAB bafakwe kwiNqanaba loHlelo lokuQala (IRL), elibekwa ngamanqaku abo. Olu luhlu olushukumisayo, kwaye isithuba sakho sitshintsha njengoko abafaki-zicelo abatshintshiweyo bongezelelweyo kwaye abafake izicelo bachongwa ukuba baqhube phambili.
Abafakizicelo abanamanani amaninzi okukhuphisana kwaye baya kunikwa iiphakethi zokukhetha zamaphepha ukuba zizaliswe ngexesha elithile. La maxwebhu afaka ifom yolwazi lomntu, ifowuni ye-polygraph yangaphambili kwengqesho, iifom ze-PARE ze-clearance forms, kunye nokuhlolwa kombono okugqitywa ngumfundi wakho we-optometrist.
Thatha kwaye udlulise uVavanyo lweMfuneko yokuHlola, uvavanyo olusetyenziswa ukuhlola ukukwazi kwakho ukwenza iimfuno zomzimba zamapolisa. Kufuneka uzilungiselele olu vavanyo.
Ukuphumelela kwiNgxowa-nxaxheba yoLuhlu lwaBelungu, oluza kuhlola ubunzima bakho bezemfundo ukuqhuba ngempumelelo njengegosa le-RCMP.
Ukuphumelela kwingxowa-ndlebe yangaphambi komsebenzi kunye nokuhlolwa kwe-polygraph ekuvavanya ukufaneleka kwakho nokuthembeka ukwenza njengegosa le-RCMP kwaye unikezela ngolwazi lwe-RCMP ukukhupha imvume yokukhusela.
Phinda uphando lwenkcazo kunye nokukhuselwa kwemvume yokufaneleka kwakho ukuba ube ilungu leRCMP.
Phinda uviwo lwezonyango, amazinyo, ukubonwa, kunye neengqondo.
Ngaphambi kokuba ungabhalisa ekuqeqesheni i-cadet, kufuneka ubonise ubungqina besitifiketi sokuqala esisiqinisekiso sokuqala esivela kwintlangano evunywe yi-Canada Occupational Safety and Health Regulations, iCanada Labor Code.
Bhalisa njengeCadet, kwaye uhambe kwiiveki ezingama-24 zeprogram yokuqeqesha i-cadet kwi-RCMP Training Academy e-Regina, eSaskatchewan.
Ekugqibeleni, ngokuqhelekileyo uza kuqashwa njengelungu eliqhelekileyo le-RCMP. Emva koko kufuneka ugqibe iiNyanga zoQeqesho lweNkundla yeeNyanga ezintandathu kwiinkampani ezikhethiweyo zoqeqesho.
Njengoko ufumana amava, amathuba amaninzi kwiindawo ezizodwa ezifana nolwaphulo-mthetho, ukuthunyelwa kwamanye amazwe, iinkonzo zaselwandle kunye neenkonzo zonyango ziya kufumaneka kuwe.
Ngaphambi kokuba ufake isicelo sokujoyina i-RCMP, funda ulwazi oluneenkcukacha kunye neencwadi kwaye ujonge amavidiyo anikezelwe kwi-RCMP yokuqeshisa isayithi.
Ukuba unezakhono zobuchwephesha, izenzululwazi okanye ezokuphatha, unokuba yilungu lombutho weRCMP.
Yintoni iKhabinethi yeKhanada?
IWinipeg General Strike 1919
I-Pension Plan (CPP) Iinguqulelo
Indlela Ifowuni yafakwa ngayo
Obama Ifowuni - Iifowuni zeeSela zamahhala zabantu abakwiNtlalontle?
IsiJalimane sabaQaleli: Isifundo 16C - IiVelbs Modal zeJamani
I-GAUTHIER - Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
I-Skywalker Family Tree
2006 Jeep Wrangler Unlimited 4X4 Ukuhlaziywa
I-Tire Repair Patch vs. Iplagi
Uludwe lweZikolo zoLuntu ze-Free Online kwi-Hawaii Students, K-12
UYesu: Iingqungquthela ekuvukeni nasekuphumeni
Yintoni iFlight Fiction?
I-FAQ yokwakha umzimba - Ndingayifumana njani i-Big and Loss Fat ngexesha elifanayo?
Yintoni eyahlukileyo phakathi kweNontheism kunye noThixo?
Ngubani oyingcwele uSeligi (i-Saint Patron of Horses)?